ukugula kwengane - lesi yisikhathi ukukhathazeka kakhulu abazali. NgoLwesine kutholakale isidumbu sendoda ingane ngayinye ihlukile, futhi izifo zihlukile. kuguquka Rapid amagciwane, kwezimo ezingezinhle kwemvelo, ongadalwa ukucindezeleka okukhulu ngemuva - zonke lezi zici abe nomthelela omubi amasosha omzimba. Ngenxa yalokho, amathuba yezinkinga kwandisa exponentially. Kunzima kakhulu kulokhu ukwenza ngaphandle kokwelashwa sina-antibiotic. Ilungelo lokuzikhethela izidakamizwa ngoba impatho kusiza okubhekana nanoma isiphi isifo. Omunye antibiotic ethandwa kakhulu seziguli ezisencane kuyinto "Cephalexin" (Ukumiswa). abazali Izibuyekezo ngalokhu nomuthi zenzeka omuhle kuphela. Ayivamile ukubangela engemihle.
Kungenzeka yini ukunikeza "Cephalexin" izingane?
Lo mbuzo ekukhathaza abazali abaningi abanezingane baye baba "abathunjwa" yezifo ezithathelwanayo. Nge isibalo seziguli ezisencane luyanda njalo ngonyaka. Sinusitis, otitis, namathansela, pharyngitis - zonke izifo ezithathelwanayo ngokuvamile ukuhlasela izingane. Ezimweni ezinjalo, aid kufika abazali abaningi "Cephalexin".
Kuyinto imfihlo ukuthi le mithi anobungozi futhi elimazayo. Naphezu kwakho konke lokhu, abazali abaningi ngokuvamile bagcizelele ukuthi udokotela wakho ebekiwe ingane ngemithi elwa namagciwane. Kungani? Kungenzeka, le mithi uyena kuphela inhlobo yayo ukuthi empeleni ozosiza umzimba ukulwa nezifo. Khomba izidakamizwa kungaba udokotela, unikezwa ngezimo zesiguli kanye nomkhakha we izidakamizwa. Ukumiswa "Cephalexin" Unazo izakhiwo elwa namagciwane. It ezinqunyiwe izingane ekwelapheni iziyaluyalu zokuphefumula of imnene umfutho ngokulinganisela.
"Cephalexin" buyisidakamizwa okuqondene iqembu semi zokwenziwa kwemithi elwa namagciwane. Kuyinto esuselwe 7-aminotsefalosporinovoy acid.
Umuthi okuthengiswa ifomu powder umbala ophuzi. Ngokuhlanganyela amanzi inika ukumiswa nge flavour elinuka. Isakhi esiyinhloko umuthi cephalexin monohydrate. Njengoba abamelwe asizayo aba izinto ezilandelayo: i-sodium benzoate, sucrose, ophuzi oxide, gum Guar, flavour.
Powder for ukumiswa yaqaphela amnyama glass amabhodlela. Okufakwe ne izidakamizwa uya ivolumu Ketha of 5 ml.
"Cephalexin" Ezinganeni (ukumiswa) ibhukwana elichaza indlela izidakamizwa nge amagciwane isinyathelo isimiso. Inzuzo yayo eyinhloko yokuntuleka ukumelana in ezithile ezincane-eziphilayo ukuthi babe amasosha omzimba ukuba elwa namagciwane izidakamizwa penicillin akuzange kusize iqembu. Imithi siyasebenza ngokumelene streptococci, Escherichia coli, Staphylococcus, Proteus, Salmonella, futhi eziningi nezinye izinto eziphilayo. Ngenxa yalokhu, ngenkuthalo esetshenziswa ekwelashweni kwe-isikhathi eside emphinjeni, ukucinana kwemigudu yokuphefumula kanye tracheitis. I ethile eyinhloko lo muthi - ukungakwazi unqobe ebuchosheni futhi ukungena meninges. Lokhu ngokuphelele akufaki elisetshenziswa encephalitis futhi meningitis of etiologies ezahlukene.
Absorption we nomuthi 90%. Ama-antibiotic ehlukene acid ukumelana naso futhi kwenze ukumuncwa ngokushesha esuka pheshana emathunjini. Ubuningi esiphezulu cephalexin monohydrate egazini waphawula ngemva 1-2 amahora kusukela esikhathini i-reception. Slurry kwasakazwa ngokulinganayo phezu mucosa we isibindi, izinso, wamaphaphu bronchi. Excreted ku umchamo kanye Bile.
Ukusetshenziswa main zomuthi - ekulweni izifo ukuvuvukala yaleli pheshana zokuphefumula. Ikakhulukazi ngempumelelo ukumiswa "Cephalexin" libonisa ngesikhathi ekwelapheni scarlet fever, catarrhal namathansela nokukhwehlela whooping. -antibiotic Excellent futhi libonisa ekwelapheni salmonellosis.
Banikezwe izakhiwo kwemithi, izidakamizwa libuye lisetshenziswe:
eczema isikhumba uhlamvu amagciwane;
izifo indlebe maphakathi kanye kwangaphakathi;
pyoderma, izilonda emathunjini dermatitis uhlobo;
Izifo ukuvuvukala izinso futhi isinye;
Ukuze uthole okuhle zokwelapha umphumela isichasiselo izidakamizwa Kunconywa ukuba agcine eziningi imithetho. Into ebaluleke kakhulu phakathi kwazo ukuthola esifike komzimba kanye hypersensitivity emuthini. Ukuze wenze lokhu, kwenziwa ukuhlolwa kwesikhumba. Ngesikhathi izimpawu kancane komzimba akufanele usebenzise ukumiswa futhi bafune iseluleko wezokwelapha.
Esinye isimo okubalulekile imithi adlulayo kungagcini yokusetshenziswa kwawo. Izingane Ezisathomba kweminyaka engu-15 akumele umiswe lezinsuku isikhathi eside kunaleso 10. Uma hlangana nalesi sikhathi, izimpawu eziyinhloko zesifo akudluliselwa, kungcono ufune usizo lukadokotela ukushintsha uhlobo lwemithi yokwelapha.
Ngayiphi izifo kungcono ukulahla ukusetshenziswa antibiotic "Cephalexin" (Ukumiswa)? Yokusetshenziswa izingane abaphethwe pyelonephritis noma wamathumbu neziyaluyalu, alikukhuthazi ukuphathwa nale izidakamizwa. Enye contraindication kuyinto ukuzwela muntu umzimba sika nemithi ye cephalosporin futhi penicillin akuzange kusize. Kudingeka ukunakekela okukhethekile kufanele inikwe izinsana ngaphansi kwezinyanga ezingu-6 ubudala.
Indlela yokusebenzisa "Cephalexin" (Ukumiswa)? Yokusetshenziswa izingane exhunywe izidakamizwa. Ngenxa izichasiselo enemininingwane kusheshe ukulungiselela imithi. Udinga nje ukwengeza amanzi ibhodlela abilisiwe izingozi imakwe ngokukhethekile. Ngemva kwalokho ungavala ibhodlela anikine kahle. Umuthi ilungele ukusetshenziswa!
Ukumiswa kufanelekile ukusetshenziswa emasontweni amabili. I ukulungele isixazululo manual incoma ligcinwe ngaso ekamelweni lokushisa. Ngaphambi ukusetshenziswa ngayinye, isitsha kufanele kahle zazamazama. Ukuze wenze it ezanele ukukala umthamo edingekayo, ungasebenzisa Ketha ekhethekile. Iphuma ne izidakamizwa.
"Cephalexin" esithathwayo ngomlomo njalo ngemva kwamahora 6. Le modi kuqinisekisa ukuchayeka engcono imibuso eyakha lo Amagciwane izidakamizwa. Umthamo kuyakhethwa ngamunye, ikhumbula nesigaba lesi sifo kanye nobudala lesiguli kancane. Ukuthuthukiswa kwabazali ukubika ngosuku yokwelapha yesibili. Ukuze ekwelapheni izifo ezingamahlalakhona lapho esigabeni acute linqume amasu slurry zokuvimbela ekhaya.
Indlela "Cephalexin" (Ukumiswa): I umthamo izingane
Umuthi esithathwayo ngomlomo 30 imizuzu ngaphambi kokudla. Umthamo ibalwa ngamunye esekelwe isisindo ingane. Per amakhilogramu umzimba isisindo udokotela ngokuvamile esabela 25-50 mg izidakamizwa. Izingane abaneminyaka engama 10 - 250-500 mg njalo emahoreni ayisithupha. Umthamo kungenziwa lenyuke uma isifo kuhambisana izimpawu ezinamandla noma izinkinga.
Isikhathi yokuyelapha izinsuku 7-10. Lapho sisebenzelana ezingamahlalakhona pheshana urinary nezifo ngalesi sikhathi lenyuka ezinsukwini ezingu-14. Kubalulekile uwaphuze uze uwaqede yokwelapha Kunconywa ngudokotela wakho. Uma isimo lesiguli iye yathuthuka ngaphambili leli gama, ethola slurry asikwazi ukumiswa. Kungenjalo, ama-bacterium ezibangele isifo angafi ngokuphelele. Ukuphumelela eziphilayo kancane kancane ziyamelana nemithi antibiotic. Lokhu kusho ukuthi kudingeke ngokuzayo ngeke ukwelapha izidakamizwa namandla.
Nge zokuzelapha nesilinganiso luyanda hypersensitivity kuya izingxenye zalo lezi zinkinga okungenzeka emathunjini ipheshana ukusebenza. Bona azibonakali ngesimo sohudo ukuvuvukala. Ezenzakalweni ezingavamile, e seziguli ezisencane ukuthi nginesifo nesifo. Ukuze lesi sifo libhekene Ukuwohloka isimo jikelele, isiyezi kanye nesicanucanu.
Ukubukeka ukuqubuka kwesikhumba noma urticaria zidinga ukuchitha ngokushesha-antibiotic futhi esikhundleni Analogue yayo. Ngo-acute iguliswa ukuphendula slurry "Cephalexin" kungaba avuse angioedema. Kulokhu, kufanele ngokushesha ubize iqembu bezempilo, futhi ngaphambi kokufika kwakhe ukunikeza ingane umthamo double we antihistamine ( "Suprastin", "Detraleks").
Lapho ekhetha ama-antibiotic ekwelapheni abazali ziqondiswa hhayi kuphela iseluleko udokotela, kodwa amanani yokugcina imithi. Iqembu elichazwe esihlokweni, ukumiswa angathengwa ngentengo ruble 200-250. Okunye imithi elwa namagciwane semisynthetic, bathambekele abiza izikhathi eziningana ezibizayo. Against isizinda eziphansi kanye nokusebenza okusezingeni eliphezulu ukumiswa "Cephalexin" "onqobayo" phakathi kokufana isinyathelo kwemithi izidakamizwa.
Khetha umuthi akusebenzi njalo okokuqala. Iqiniso lokuthi kunzima ayichaze amabhaktheriya ezibangele isifo. Uma emva kwezinsuku 2-3 kusukela ngosuku ukwelashwa isimo somntwana ingakuthuthukisi, esikhundleni "Cephalexin". Ukumiswa izingane ubhekwa ifomu elula kakhulu izidakamizwa. Ngakho-ke, odokotela batusa ontanga ukuba afune izindlela ezinjalo.
"Amoxicillin" - ethandwa kakhulu Analogue "cephalexin". Zombili lezi izidakamizwa abe Ukwakheka efanayo. Umehluko kuphela - kuyinto nomkhiqizi. Ngakho-ke, ukuthi onjani imithi kungcono, kunzima kakhulu. Bangabakhe kweqembu elifanayo cephalosporins nokusebenzisa cishe ngokufana ncamashí.
Phakathi kwezinye analogs aziwayo-antibiotic yilezi ezilandelayo:
Khumbula ukuthi udokotela kuphela ingabhekana ukukhethwa izindlela analog.
"Cephalexin" Ezinganeni (ukumiswa): Izibuyekezo
Iqembu elichazwe esihlokweni kwakhiwa ama-antibiotic ngokwayo imicabango yabantu emihle kuphela. Abazali uqaphele ukuthi ukusebenzisa kwayo kunomthelela ukululama ngokushesha ingane. Inkambo yokwelashwa akuyona amasonto angaphezu kwamabili, kodwa zingakapheli izinsuku ezingu-2-3 imiphumela yokuqala ebonakalayo yokwelapha.
Inzuzo ebalulekile umuthi ekwakhiweni yayo. Izingane eziningi zenqaba ukuthatha amaphilisi noma amaphilisi. Izinkampani ezithaka amakhambi iye yathatha le Eqinisweni ku-akhawunti. Ukumiswa has iphunga elimnandi, futhi bumnandi kakhulu.
impilo Ingane kuyingxenye ebalulekile yokuphila okujabulisayo. Lapho ingane uwela engeyinhle, abazali wathumela wonke amabutho ukululama kwakhe ngokushesha. Namuhla, uphathwa ngokuya kudingekile iphendukele antibiotic. Enye yemikhiqizo ethandwa kakhulu iyona "Cephalexin" (Ukumiswa). Umthamo le imithi eziyalezweni ukwelashwa ngokuqinile kunqunywa udokotela wakho. Uma ulandela zonke iziphakamiso zayo, akukho ukumesaba yemiphumela emibi kanye nezinkinga. Hlala uphilile!
"Buscopan" (amakhandlela) ngaphambi kokubeletha: ukubuyekezwa kanye Umhlahlandlela
I-placenta eludongeni lwangaphakathi lwesibeletho: okujwayelekile noma ukukhubazeka?
Dzheymi hins. Umlando wokuphila nothando